I-11 / 05 / 2020 | RayHaber | raillynews
Usuku: Meyi 11, 2020
Kumenyezelwe intengo yokuthengwa kwetiyi yobudala engama-2020
UMongameli Recep Tayyip Erdoğan umemezele izinqumo ezintsha ezithathiwe ekulweni nama-coronavirus ngemuva koMhlangano weKhabhinethi. UMongameli Erdoğan uphinde wakhuluma ngokuthengwa kwetiye futhi wenza lesi sitatimende esilandelayo: U-Erdogan uthe, "Ngo-2020 [Okuningi ...]
UMongameli Recep Tayyip Erdoğan ubeke isitatimende ngemuva komhlangano wekhabinet. Ngokwesitatimende, abantu abaneminyaka yobudala engama-65 bazokwazi ukuphuma baye emigwaqweni ngeSonto, ngoMeyi 17, 2020 phakathi kuka-11.00-17.00. Ngaphansi kweminyaka engama-20 [Okuningi ...]
Ukuvinjwa kokuhamba kukhishelwe emadolobheni angu-9
Ukuvinjwa Kwezokuhambela Emizini Eyi-9 Kususiwe: UMongameli Erdogan, owenze isitatimende mayelana nodaba olwafika kwi-ajenda ngemuva koMhlangano weKhabhinethi, umemezele ukuthi sekususwe isivumelwano sokuhamba sedolobha. Nazi izifundazwe lapho kwavalwa khona ukuvakasha. [Okuningi ...]
Umzuzu wokugcina: Ukuvinjiswa Kwama-Curfew Sekuphele Izinsuku ezi-4 nezinyathelo ezintsha
UMongameli Recep Tayyip Erdoğan wenze izitatimende ezibalulekile ngemuva kweHhovisi likaMongameli. "Isikhathi sokubuya ekhaya sizophinda sisebenze ngoMeyi 16-17-18-19," kusho u-Erdogan esitatimendeni. Emhlanganweni lapho u-Erdogan ememezele izinqumo zakhe zamasonto onke nekheli esizweni, [Okuningi ...]
Izindlela zokuqapha ze-COVID-2020 zeholide lango-19
Ngokufika kwenkathi yehlobo ngemuva kokuqubuka kweTurkey Covidien-19 kwenziwa umsebenzi odingekile wokuvuselela umkhakha wezokuvakasha. Ngokwesilinganiso salezi zifundo, amandla emahhotela asezindaweni ezizovakashelwa ancishiswa ngesigamu. Izilokotho zelanga elwandle [Okuningi ...]
Thumela uCoronavirus wezinwele kanye neBarbers Wages
Ngokwesilinganiso sokuthathwa kwezinyathelo ze-coronavirus, abagundi nabalungisa izinwele, okwathi imisebenzi yabo yamiswa ngoMashi 21, baqala ukusebenza njengamanje ekuseni. Amakhasimende abeze nokuvulwa kwabagundi babephethe izimbambo zabo ngaphansi kwemithetho yenhlanzeko. 40 ISIKHATHI SEPERCENT Kepha inkonzo [Okuningi ...]
Izimboni Zezitimela Nezinhlelo Zokulawula Ikhwalithi
Uma imboni yezitimela ibhekwa ngokwemigomo yendlela esezingeni, ingahlawula inani elikhulu lamazinga kanye nezinhlelo zokuphatha. Ububanzi bohlelo lokusebenza bunezicelo eziningi embonini ebanzi kangaka. I-ISO 9001: Ukuphathwa Kwekhwalithi yango-2015 ku-Railways [Okuningi ...]
ICoronavirus ibathinta kanjani abesifazane abakhulelwe
Ochwepheshe abathi ukukhathazeka kwabo kungakhuphuka ngemiphumela yezinguquko ze-hormonal ezitholwa abesifazane abakhulelwe kule nqubo yokuqothuka egcizelela ukuthi amasosha omzimba kufanele agcinwe eqinile ngale nqubo. Ochwepheshe banxenxa omama ukuba basebenzise ngokucophelela futhi njalo [Okuningi ...]
Ngubani u-Şakir Zümre?
U-Şakir Zümre, omunye wezihlobo eziseduzane zikaMarshal Fevzi Çakmak, wazalelwa eVarna ngonyaka we-1885. Ngemuva kokuqeda imfundo yakhe yamabanga aphansi lapha, waya eGeneva. Wafunda umthetho lapha. Futhi phakathi neMpi Yezwe Yokuqala [Okuningi ...]
UNgqongqoshe Wezokuxhumana kanye Nezingqalasizinda u-Adil Karaismailoğlu wenza izivivinyo eBaşakşehir İkitelli City Hospital indawo yokwakhiwa komgwaqo. IKaraismailoğlu, imigwaqo ye-ambulensi okufanele yenziwe emnyango womnyango ophuthumayo wesibhedlela nokwakhiwa kwemigwaqo eseceleni yokungena entshonalanga [Okuningi ...]
Ukwenqatshelwa kwesicelo sokuxoshwa komuntu oyedwa ogwetshiwe ku-Ankara YHT ngengozi
Isitimela Esiphezulu, esenze ukuphuma kwe-Ankara-Konya ngomhlaka 13 Disemba 2018 e-Ankara, kwashayisana nesitimela esiqondisa izinkomba ngesikhathi singena esiteshini saseMarşandiz. Kule ngozi eyenzekile, kwabulawa abantu abangu-9 kwathi oyedwa wabo waboshwa. [Okuningi ...]
Isiteshi sesitimela i-Adana noma i-Adana Station Station iyisitimela esikhulu seTCDD esiseSeyhan esifundeni sase-Adana. Isiteshi saqala ukusebenza ngo-1912. Namuhla, kusekhaya ku-6th Directorate of TCDD [Okuningi ...]
Ithenda yesiteshi esisha sebhasi, ephakathi kwamaphrojekthi iMeya yaseTrabzon Metropolitan uMurat Zorluoğlu ekuthola ukubaluleka, kuhlelwe ukuthi iqale ukuphela ngoMeyi. Okusha okuzogcwalisa ukusweleka okukhulu edolobheni [Okuningi ...]
Iyaqhubeka nemizamo yayo yokuhlinzeka ngezinto zokuhamba eziphephile, ezikhululekile nezenhlanzeko kubahlali base-Eskişehir, uMasipala wase-Eskişehir Metropolitan ubuye wenza nemigwaqo yabo yokuhlanza ejwayelekile kule mpelasonto. Ukuqubuka kweCorona [Okuningi ...]
UMasipala we-Ankara Metropolitan ufaka imibala ngaphansi kwezinyawo zabahamba ngezinyawo, amabhuloho nezindawo ezingenasisekelo sedonga enhlokodolobha ngokuthinta komlingo kwabadwebi. Ngephrojekthi esetshenziswe yiMeya yeMetropolitan uMansur Yavaş, abadwebi abavela enhlokodolobha [Okuningi ...]
Isikhathi Esisha Sokubulala magciwane eKonya Ezokuhamba
UMasipala waseKonya Metropolitan ushintshela ohlelweni olusha lokulwa namagciwane ngaphansi kwenqubo yokulwa uhlobo olusha lwe-coronavirus (Kovid-19) ngokubambisana ne-KTO Karatay University. Isibonelo seTurkey, ezovikela impilo yomphakathi ekulweni neKoronavirüsl [Okuningi ...]
Imigwaqo yaseBursa Ibuyiselwe Esayithini
Esikhathini esisetshenziswa ekhaya ngezimpelasonto ngaphakathi kwesilinganiso sokulwa negciwane le-corona, uMasipala we-Metropolitan, oqhubeka nokuvuselelwa kwe-asphalt usebenza emithanjeni eyinhloko yaseBursa, ngakolunye uhlangothi, uhlinzeka ngezinsizakalo ezilindelwe komakhelwane iminyaka. [Okuningi ...]
Amahora Obhano Lwesitimela Anwetshiwe E-Istanbul!
UMasipala wase-Istanbul Metropolitan (IMM) umemezele ngoMsombuluko ukuthi kuzofakwa izintela ezintsha eziteshini zikaloliwe ngemuva kokufika isikhathi. Imigqa ye-metro nethilamu ebekiwe izosebenza phakathi kuka-06:00 - 23:00. Unolwazi ngenani labagibeli [Okuningi ...]
Izindiza ze-Akçaray Zanda Ngesikhathi Sokwenza Okujwayelekile
AbakwaTravelPark, ongomunye wababambisene noMasipala waseKocaeli Metropolitan, umemezele ukuthi u-Akçaray uzohlela indiza yemizuzu engu-11 ngezikhathi eziphakeme ngoMsombuluko, ngoMeyi 2020, 6. I-Akçaray izokwenza uhambo ngezikhathi ezi-7 ezihlukile, usuku [Okuningi ...]
Isimo seCoronavirus esikhumulweni sezindiza i-Istanbul! Inani Labagibeli Kwehliswe ngu-99,3 Amaphesenti
Imikhawulo yokuhamba ibekiwe emhlabeni jikelele ngenxa yokuqubuka kwegciwane le-corona. Ngenxa yalesi sizathu, inani labagibeli esikhumulweni sezindiza i-Istanbul lehle ngamaphesenti angama-99,3. ISikhungo Sokupholisa Izindiza (i-DHMI) sesikhiphe izibalo zayo zezindiza ngo-Ephreli. [Okuningi ...]
USakarya Nostalgic Tram uyiBhidi futhi
Ekhuluma ohlelweni i-'Head to Head ne-President' oluhlelwe yiSakarya University, iMeya yaseMetropolitan u-Ekrem Yüce ukhulume ngephrojekthi yeNostalgic Tram, ithe ithenda yayo yahlehliswa ngenxa ye-coronavirus. [Okuningi ...]
Ngubani uTomris Uyar?
UTomris Uyar, osweleke eneminyaka engama-17 nje eyi-62 edlule futhi wasishiya, waphinde wakhunjulwa nge-doodle yakhe. Nansi impilo kaTomris Uyar futhi usebenza uTomris Uyar (Mashi 15) [Okuningi ...]
Inketho Engcono kakhulu Yezomnotho Neyiluhlaza Kakhulu Izimoto LPG
Ngemuva kobhubhane lwe-coronavirus, inqubo yokulungisa isimo ehlelelwe ukuqala emhlabeni kanye nezwe lethu iletha imikhuba emisha emiphakathini. Ngenkathi ibanga lomphakathi kanye nemithetho yezenhlanzeko ihlala ibalulekile enqubweni ejwayelekile, izimoto zokuhamba zomphakathi eziphele zinezibalo [Okuningi ...]
Ukutshalwa Kwezimali Emkhakheni We-Appraisal Akusike Ngejubane
Ngemuva kokucaciswa kwezindinganiso zokuvula isikhungo sokuhlaziya ngamalungiselelo enziwe emkhakheni wezimoto osetshenzisiwe, izinkampani zokuhlola, ezisheshise ukutshala imali yazo, nazo seziqalile ukuthatha izinyathelo ezinkulu zokusungula izikhungo kanye namagatsha. Ukuhweba okwenziwe ngezimoto [Okuningi ...]
Ukuxhaswa Okusha Kwezolimo Kwokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya kwe-1,2 Bilion Liras!
Ungqongqoshe Wezolimo Namahlathi UBekir Pakdemirli; “Siyaqhubeka nokuletha ukuxhaswa kwezindawo zasemakhaya kwe-IPARD kubatshalizimali ngenhloso yokutshala imali eningi emaphandleni, imali engenayo yabakhiqizi kanye neqhaza elengeziwe emsebenzini. Ngalesi sikhathi [Okuningi ...]